घुम्न कहाँ जाने, सोच्दै हुनुहुन्छ? – देशसञ्चार
यस्ता छन् दश गन्तव्य
जाडो न गर्मी रहेको यो मौसम घुम्नलाई उपयुक्त छ । खुलेको आकाश । प्राय सबैतिर हरियाली । चाडबाडको माहोल छ । कामका लागि बाहिर रहेकाहरु घर फर्किँदै छन् । कोही घरमा बसेर चाड मनाउने ध्याउन्नमा छन् । कोही भने बिदाको समयलाई सदुपयोग गरी घुम्न निस्के या निस्कने तयारीमा छन् ।
पहिले विदेशीहरु मात्र लामो यात्रामा निस्केको देखिन्थ्यो । तर अचेल नेपालीहरु पनि साथीभाइसँग योजना बनाएर घुम्न निस्कन्छन् । र यो संख्या बढ्दो छ । बिदाको छेको पारेर विदेश तथा देशकै विभिन्न ठाउँमा घुम्न जानेहरु प्रसस्त छन् ।
तपाईँ पनि घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहन्छ भने, नेपालमा धेरै मनोरम स्थान छन् जहाँ परिवार तथा साथीभाइसँग जान सकिन्छ । हामी लामो बिदा तथा केही ट्रकिङका लागि उपयुक्त ठाउँको चर्चा गर्ने छौँ । तर त्यो भन्दा पहिला यात्रामा निस्कनु भन्दा पहिला ख्याल गर्नु पर्ने कुराबारे चर्चा गरौँ । तपाईँ कुन ठाउँ जाने त्यसअनुसारको ब्याग प्याक गर्नुपर्छ । त्यहाँको मौसम अनुसार आफूलाई चाहिने समानको जोहो गर्नु पर्छ ।
पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा यात्रा गर्दा चाहिने समान र तराईमा यात्रा गर्दा चाहिने सामान फरक हुन्छन् । चिसो बढ्दै छ पहाड र हिमालमा जाँदै हुनुहुन्छ भने न्यानो कपडा ब्यागमा राख्न नबिर्सनुहोला ।
जाडोबाट बच्न क्रिम तथा अप्ठ्यारो पर्दा चाहिने प्राथामिक उपचारका सामग्री राख्दा उत्तम हुन्छ । हिमाल क्षेत्रमा हिँड्दा लेक लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यसबाट बच्ने उपायहरु थाहा पाउनु पर्छ । हिमाली क्षेत्रको यात्रामा गर्मी भयो या पसिना आयो भनेर ज्याकेट तथा टोपी फुकाल्नु हुँदैन । चिसोले समाउन सक्छ र विरामी पर्न सकिन्छ । पदयात्रा मार्गमा खानेकुरा पाइने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसको जोहो गरेरै गएको राम्रो ।
अब गन्तव्यहरुको कुरा गरौँ, र हाम्रो यात्रा पश्चिमबाट सुरु गरौँ ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पर्ने यो धार्मिक र प्राकृतिक रुपमा संरक्षित क्षेत्र हो । यो समुन्द्र सतहबाट ३ हजार मिटरको उचाइमा छ । खप्तड बाबाको नामबाट चर्चित यो क्षेत्र बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा फैलिएको छ । भौगोलिक परिदृश्यमा हरियाली युक्त हल्का भिरालो चउरहरु, खोला नाला र घाँसे मैदान गरेर २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ ।
यो मौसममा हरियालीले ढाकिने खप्तड पुस महिनापछि भने सेताम्य हिउँले ढाकिन्छ । वैशाखदेखि असारसम्म रंगीचंगी फूलहरुले फाँटहरु मन लोभ्याउने हुन्छन् । खप्तड क्षेत्रको प्रमुख विशेषता भनेको विशाल फाँटहरुमा फुल्ने रंगीचगी फूलहरु नै हुन् । फूल फुलेका फाँटको किनारमा रुखहरुसहितको सुन्दर बगैँचा गज्जबको अनुभव गर्न पाईन्छ । यहाँ २७० प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।
साथै खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, खप्पर दह, शिव मन्दिर, सहस्र लिंग, गणेशस्थान, नागढुंगा, केदारढुंगा जस्ता धार्मिक स्थलहरु पनि छन्, जसले खप्तड क्षेत्रलाई निकै प्रख्यात बनाएका छन् । खप्तड क्षेत्रका रहेका ठूला–साना गरी २२ वटा फाँट पनि आकर्षणका केन्द्र हुन् ।
खप्तड पुग्न कैलालीको धनगढीसम्मको यात्रा गर्नुपर्छ । धनगढीबाट डोटीको सिलगढीसम्म बसमा आठ घण्टाको यात्रा गरेपछि पैदल हिँड्नुपर्छ । सिलगढीबाट बगलेगसम्म जिप पनि चल्ने भएकाले जिप रिजर्भ गरेर पनि जान सकिन्छ । सिलगढीबाट सुरु भएको पैदल यात्राको पहिलो दिन झिगराना र दोस्रो दिन खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्न सकिन्छ ।
यस्तै अछामको साँफेबगरबाट झिग्रानासम्म २ घण्टाको बस यात्रा र त्यहाँबाट ८ घण्टाको पैदल यात्रामा खप्तडबाबाको आश्रम पुग्न सकिन्छ । त्यहाँबाट खप्तड दह, सहस्र लिङग, नाग दह, त्रिवेणी धाम । यसका लागि तपाईँको घर तथा यात्रा सुरु गर्ने स्थानबाट कम्तिमा ६ देखि १० दिन छुट्याउँदा हुन्छ ।
पछिल्लो समय सबैको मन र मुखमा झुण्डिएको ठाउँ हो रारा । घुम्ने पारखीहरु यहाँ कि पुगेका छन् कि प्राथामिकतामा राख्ने गर्छन्् । पश्चिम नेपालको मुगु जिल्लामा पर्ने यो ताल समुन्द्र सतहदेखि २ हजार ९ सय ९० मिटरको उचाईमा छ ।
वरिपरि सल्लाको घारी निलो शान्त ताल, सुन्दरताको एक टुक्राको अनुभव गर्न सकिन्छ । तालले घामको किरण अनुसार आफ्नो रङ बदल्ने गर्छ । रारा तालमा विश्वमै कहीँ पनि नभेटिने स्नोट्राउट प्रजातिको माछा पाइन्छ । तालको पूरा भाग हेर्न ४००० मिटरको उचाईमा तालको दक्षिण पश्चिममा रहेको मुर्माटप उक्लिनु पर्ने हुन्छ ।
यहाँ पुग्न पनि दुई वटा बाटो छन् । नेपालगञ्जबाट करिब ४० मिनेटको हवाई यात्रामा मुगुको ताल्चा बिमानस्थल उत्रेर त्यहाँबाट करिव ३ घण्टा पैदल यात्रामा ताल पुग्न सकिन्छ ।
यस्तै स्थल मार्ग हुँदै जानको लागि कोहलपुर हुँदै सुर्खेत पुग्नु पर्ने हुन्छ । सुर्खेतबाट दैलेख, कालिकोट सदरमुकाम मान्म, नाग्म र जुम्लाको सिन्जा उपत्यका, भुलभुले हुँदै रारा ताल पुग्न सकिन्छ । गाडीमा करिब २ दिनको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ रारा पुग्न ।
बर्दिया तराईको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । नौ सय ६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो निकुञ्ज बाघ हेर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली र बबईको बिचमा निकुञ्जका केही भागहरु पर्ने भएकाले पनि जनावरका लागि उपयुक्त बनेको छ ।
हाल बबई उपत्यका निकुञ्जमा सबैको आकर्षण बनेको छ । द्धन्द्धकालमा बन्दरहेको निकुञ्जको चुरे क्षेत्रमा रहेको यो ठाउँ हाल खुला गरिएको छ । जहाँ पर्यटकले रात विताउने अवसर पाउँछन् । २०४० सालमा राजा वीरेन्द्रले निकुञ्ज बिस्तार गर्न साबिक सानोश्री पञ्चायतलाई स्थान्तरण गरेका थिए । तिनै ठाउँलाई अहिले बबई उपत्यका भनिन्छ । उपत्यकासम्म पुग्न राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय ठाकुरद्धाराबाट करिब १० घण्टाको पैदल यात्रा वा जंगल सफारी पनि गर्न सकिन्छ ।
उपत्यकाबाट सूर्योदय र सूर्यास्त अवलोकन गर्न सकिन्छ । निकुञ्जमा राजस्व तिरेर बबईमा माछा मार्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, माछा मारेर खान पाइँदैन ।
निकुञ्जको ७० प्रतिशन भूभाग साल र यसको सहायक प्रजातिका वनस्पतिले वन ढाकिएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत घाँसे मैदान छ । निकुञ्जमा ५४ प्रजातिका स्तनधारी, ४०० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, २५ प्रजातिका घस्रने वन्यजन्तु र ६० भन्दा बढी प्रजातिका माछाहरु पाइने निकुञ्जले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभएर थारु समुदायको मौलिक संस्कृतिका लागि पनि बर्दिया निकै प्रख्यात छ । बर्दियाको विभिन्न स्थानमा खोलिएका होमस्टे र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै रहेको ठाकुरद्वारा मन्दिर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रख्यात छ
पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वार नेपालगञ्जबाट दुई घण्टाको बस यात्रापछि सहजै पुग्न सकिने यस निकुञ्ज पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अम्बासबाट जम्मा १३ किलोमिटर टाढा छ । यसका करिब ५ दिन छुट्याउँदा हुन्छ । बाघ हेर्नको लागि भने केही दिन कुर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम नेपालको डोल्पा तथा मुगु जिल्लामा फैलिएको छ । यसको क्षेत्रफल ३,५५५ वर्ग किलोमिटर छ । यो निकुञ्ज २०५० सालमा स्थापना गरिएको हो । यस निकुञ्ज भित्र नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल फोक्सुण्डो तथा एक ऐतिहासीक शे गुम्बा रहेका छन् र यिनीहरूकै नाम जोडेर यसको नामाकरण गरिएको हो ।
शे–फोक्सुण्डो ताल ३९०० मिटरको उचाईमा डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ । यस तालको लम्बाइ ४.८ कि. मी., चौडाइ १.६ कि.मी. र गहिराई १४५ मिटर रहेको सन् २००४ मा नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा एउटा सर्वेक्षणले देखाएको थियो । कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित यो ताल वाई आकारको छ ।
हवाई यात्रामा नेपालगञ्जबाट सिधै डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा उत्रेर त्यहाँबाट पैदल त्रिपुराहुँदै तालसम्म पुग्न सकिन्छ । स्थलमार्गबाट यहाँ जान बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्छ । त्यहाँबाट सुर्खेतको छिन्चुहुँदै दायाँ लागेर जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगा हुँदै रिन्मा पुग्नु पर्नेहुन्छ ।
भेरी नदीको छेउछेउ खलंगाबाट रिन्मासम्म बसको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । रिन्माबाट रुकुमको त्रिवेणीसम्म जिपको यात्रा गर्नुपर्छ । त्रिवेणीबाट खादान र त्रिपुराकोट हुँदै तालसम्म पुग्न सकिन्छ । त्रिवेणीबाट अगाडि पैदल यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हिमालको बाटो चट्टानमा हिँड्नु पर्ने भएकाले त्यहाँ पुग्न अलि धेरै दिन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
आँखै अगाडि विश्वको सातौँ अग्लो धौलागिरी हिमाल । त्यसैले पर्यटकहरु धौलागिरी हिमाल हेर्न म्याग्दीको पुनहिल पुग्छन् । यो स्थान धौलागिरी हिमशृंखला हेर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो । समुन्द्री सतहबाट ३ हजार २ सय १० मिटर उचाइमा अवस्थित पुनहिलबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे, नीलगिरी लगायत १५ वटा हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
त्यस्तै पुन हिल अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको भ्यु पोइन्टको रुपमा पनि लिइन्छ । पुनहिलको बाटोमा जहाँबाट पनि मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । नेपाल घुम्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पुनहिलको ट्रेकिङ गर्न सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
घोरेपानी र पुनहिल ट्रेकलाई एक रगिंन यात्राको रुपमा लिन सकिन्छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट सुरु हुने यो यात्रा पोखरा पुगेर टुङ्गिन्छ । नेपालमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकको रोजाइको उत्कृष्ट दशभित्र पुनहिल पदयात्रा पर्छ ।
भन्नु पर्दा पोखरा एक हिसाबले नेपालको पर्यटकीय राजधानी नै हो । एकै स्थानमा ताल, हिमाल, मन्दिर, गुफा अवलोकन गर्न सकिन्छ पोखरामा । यसका साथै साहसिक खेलहरु प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिप फ्लायर लगायत दर्जनौँ गतिविधि हुने भएकाले पनि यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय राजधानी भन्ने गरिन्छ ।
कास्कीको घोरेपानीबाट आधा घण्टाको उकालो हिँडेपछि पुनहिल पुगिन्छ पुनहिल पदयात्राको क्रममा दुईवटा विकल्प छन् । एक, पुनहिल पदयात्रा मात्र र अर्को, पुनहिल हुँदै अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविरसम्मको यात्रा । पोखरादेखि पुनहिल पुगेर र्फकनका लागि पाँच दिन लाग्छ । अन्नपूर्ण हिमालको आधारशिविर पुगेर फर्कनका लागि भने आठ दिन लाग्छ ।
पोखरादेखि पुनहिल र पुनः पोखरा फर्कनका लागि पाँच दिनको समय छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ । पोखराबाट पहिलो दिन तिखे ढुंगा र दोस्रो दिन घोरेपानी पुग्न सकिन्छ । तेस्रो दिन घोरेपानीबाट सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न पुनहिल टावर गएर पुनः घोरेपानी आई टाडापानीमा बस्न सकिन्छ । त्यसपछि चौथो दिन घान्द्रुक र पाँचौँ दिन पोखरा पुगिन्छ ।
यस बाहेक पोखरादेखि पुनहिल हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर पुनः पोखरा आउनलाई ११ दिनको पदयात्रा राम्रो हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने यो स्थान विभिन्न पदमार्गको प्रवेशद्वार पनि हो । अन्नपूर्ण, माथिल्लो मुस्ताङ, पुनहिल लगायत पदमार्गको प्रवेशद्वार पोखरा हो ।
राजधानी काठमाडौँबाट पोखरासम्म सार्वजनिक बसको यात्रा गर्न सकिन्छ । बस व्यवसायीहरुले पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न बसको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसबाहेक काठमाडौँबाट पोखरासम्म सिधै हवाई सेवाको सुविधा पनि छ । पोखरा पुगेपछि पैदल यात्रामार्फत गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।
विश्वको चर्चित पदमार्गमध्ये एक हो, अन्नपूर्ण पदमार्ग । विश्वका उत्कृष्ट दश पदमार्गभित्र पर्ने भएकोले यो पदमार्ग विश्वभर परिचित छ । यो पदमार्ग नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छ ।
यो क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा सबै स्थानमा टी–हाउस भएकोले पनि अन्य पदमार्ग जस्तो पैदल यात्रीलाई समस्या हुँदैन । ठाउँ–ठाउँमा थकाइ मार्न र चिया–कफीको तलतल मेटाउन सहज हुन्छ । पदमार्गका सबैजसो स्थानमा सुविधासम्पन्न होटल तथा लजहरु भएकाले पदयात्राका क्रममा खान र बस्न सहज हुन्छ ।
लमजुङको बेसीसहरलाई अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार भनिन्छ । बेसीसहर हुँदै खुदी, भुलभुले, स्याँगे, जगत हुँदै मनाड जिल्लाको ताल, बगरछाप, चामे, थोरङपास हुँदै मनाङ पुगेपछि अन्नपूर्ण पदमार्ग सकिन्छ ।
यस बाहेक पोखरादेखि पुनहिल हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर पुनः पोखरा आउनलाई ११ दिनको पदयात्रा राम्रो हुन्छ ।
उपल्लो मुस्ताङ ट्रेकलाई मुस्ताङको लोकप्रिय क्षेत्र हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थल हो उपल्लो मुस्ताङ । विशेष गरी यो मौसममा उपल्लो मुस्ताङ घुम्न लायक गन्तव्य हो । पहिले तिब्बती साम्राज्यको एक भागको रुपमा रहेको ल्हो क्षेत्र सँस्कृति र भौगोलिक दृश्यको कारणले पनि तिब्बत जस्तै लाग्छ । मसोमबाट उपल्लोे मुस्ताङसम्म सवारी साधन चल्न थालेपछि आन्तरिक पर्यटकको पनि चाप बढेको छ ।
जोमसोमबाट सवारी साधनमार्फत एक दिनको यात्रा गरेपछि माथिल्लो मुस्ताङ पुगिन्छ भने पैदल यात्रा गर्दा तीन दिन लाग्छ । माथिल्लो मुस्ताङमा जीवनशैली अन्य जिल्लाहरुको भन्दा फरक भएकोले पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढी हुने गर्छ ।
आश्चर्यजनक खालका चट्टानहरुले घेरिएको र मरुभूमी जस्तो देखिने भौगोलिक दृश्यको बिचमा गाँउहरु र त्यहाँका हरिया खेतहरुले मरुभूमिको बिचमा बगैँचा जस्तो देखिन्छ । यस क्षेत्रमा नौतले गुफा, मौलिक संस्कृति, जीवनशैली, मनमोहक प्राकृतिक दृष्य तथा कोरला नाका प्रख्यात छन् ।
काठमाडौँबाट नै निजी सवारी साधनमा माथिल्लो मुस्ताङसम्म पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट जोमसोमसम्म हवाई यात्रा पनि गर्न सकिन्छ । जोमसोमदेखि छुसाङसम्म जिपको यात्रा गर्नुपर्छ ।
बाटोमा पर्ने खोलामा मोटरेबल पुल नभएकोले पैदल पुल तरेपछि फेरि अर्को गाडी चढेर माथिल्लो मुस्ताङ ६ घण्टामा पुग्न सकिन्छ ।
तिलिचो ताल आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । करिब ५ हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित यो ताल मनाङमा पर्छ । कूल ४.८ वर्ग किमीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ताल वरिपरी सेता टल्किने तिलिचो हिमाल, अन्नपूर्ण रेन्ज र नीलगिरि हिमाल रहेका छन् । हिमालको छाया तालमा परेको दृश्य लोभै लाग्दो हुन्छ ।
तिलिचो ताल विश्वको सबैभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको ताल मानिन्छ । अन्नपूर्ण पदयात्रा गर्ने सबैले थोरोङ्ग्ला पास गर्दा यो ताल भएर जाने गर्छन् । मनाङ र तिलिचो तालको बिचमा धेरै लजहरु खुलेका छन् । पदयात्रा मन पराउनेहरुको लागि धेरै नै रोमाञ्चक हुनेछ ।
ताल हेर्नका लागि जुनसुकै समयमा जान सकिँदैन । असोजदेखि मंसिरसम्म र चैतदेखि जेठ महिना उपयुक्त हुन्छ । धेरै अग्लो स्थानमा रहेको र नजिकै रहेका हिमालले गर्दा बढी चिसो र लेक लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । तालसँगै मनाङको संस्कृती र भौगोलिक बनोटले पनि सबैको मन लोभ्याउँछ ।
यहाँ जान कम्तिमा तिन दिन लगाउनु पर्ने हुन्छ । उचाइमा भएका कारण सिधै माथि जाँदा लेक लाग्ने सम्भावना हुन्छ । पहिलो दिन लमजुङको बेसिसहर वा त्यो भन्दा माथि पुग्न सकिन्छ ।
अर्को दिन चामेबाट खाङसार हुँदै तिलिचो बेसक्याम्प बस्नु पर्नेहुन्छ । बेसक्याम्पबाट ४ घण्टामा ताल पुगन सकिन्छ । तालको छेउमा बस्ने व्यवस्था नभएकाले फर्किनु पर्ने हुन्छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथिभरा मन्दिर नेपालका साथै भारतका धार्मिक पर्यटकमाझ पनि चर्चित छ । यो मन्दिरमा बर्सेनि लाखौँ भक्तजन दर्शन गर्न आउने गर्छन् । पाथिभरा मन्दिर समुद्री सतहबाट ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उाचाइमा छ ।
कुम्भकर्ण हिमाल हेर्न पनि पाथिभरा उपयुक्त गन्तव्य हो । असोज–कात्तिक महिनामा मौसम सफा हुने भएकाले पनि यतिबेला हिमाल हेर्ने उपयुक्त समय हो ।
काठमाडौंबाट यात्रा गर्नेहरु इलामको चिया बगान हुँदै पाथिभरा जाने भएकाले निकै रमाइलो अनुभव हुन्छ । यसैगरी काठमाडौँबाट सुकेटारसम्म हवाई यात्रा र त्यसपछि ६ घण्टा पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ पाथिभरा ।
काठमाडौँबाट दुई दिनको बसयात्राबाट फेदी पुगेपछि पाँच घण्टाको पैदल यात्रापछि पनि पाथिभरा पुग्न सकिन्छ ।
धार्मिक रुपमा परिचित गोसाइँकुण्ड टे«किङको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ हो । समुन्द्र सतहबाट करिब ४४ सय मिटरको उचाइमा रहेको यो तालसँगै मन लोभ्याउने अरु ६ वटा ताल छन् । गोसाईँकुण्डको किनारै किनार त्रिशूलधारा हुँदै उकालो लागिसकेपछि बायाँ तर्फ छ, बर्दकुण्ड । अलि अगाडि निकण्ठकुण्ड ।
दायाँ तर्फ सजिलै नदेखिने ठाउँमा छ चन्द्रकुण्ड । सबैभन्दा माथि सिरानमा छ सूर्यकुण्ड । सूर्यकुण्डबाट फर्कदा बायाँ तर्फ छ आमाकुण्ड । तल छ भैरवकुण्ड र सबैभन्दा तल छ सरस्वतीकुण्ड । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका रमणीय दृश्य हेर्दै तालसम्म पुग्न सकिन्छ ।
यो एक ट्रेकिङ्ग रुट हो । काठमाडौँबाट सुन्दरीजल हुँदै सिन्धुपाल्चोकको चिसापानी, कुटुमसाङ, घोप्टे हुँदै गोसाईँकुण्ड पुगेर चोलाङपाटीको ओरालो झर्दै धुन्चे पुगेर काठमाडौँ फर्कन सकिन्छ । यस्तै ठ्याक्कै त्यसको उल्टो काठमाडौँबाट धुन्चे पुगेर देउराली, धिम्सा, सिङ गोम्पा, चोलाङपाटी, लौरीविनायकको उकालो चढदै गोसाइँकुण्ड पुगेर घोप्टेको ओरालो भरेर सुन्दरीजल हुँदै काठमाडौँ फर्किन सकिन्छ ।
यसका लागि करिब ८ दिन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यी प्रतिनिधि गन्तव्य मात्रै हुन् । घुम्ने ठाउँहरुको छनौट आफ्नो रुची अनुसार गर्ने हो । तर त्यहाँको मौसम अनुसार यात्राको तयारी भने गर्नु पर्छ ।
अशोज १५, २०७६ मा प्रकाशित